Haddiiba ay dhacdo - BBC Somali - Maqal iyo Muuqaal
Haddiiba ay dhacdo
Markii u dambaysay ee la cusboonaysiiyay: 7 Febraayo, 2013, 13:44 GMT 16:44 SGA
BBC waxay eegeysaa mustaqbalka - waxa uu u keeni karo caafimaadka, waxbarashada, gaadiidka iyo weliba jacaylka. Waxaan weydiinay lix farshaxan-yaqaan oo dunida dhan ah inay sawiraan aragtidooda ku wajahan mustaqbalka.
BBC waxay eegeysaa mustaqbalka - waxa uu u keeni karo caafimaadka, waxbarashada, gaadiidka iyo weliba jacaylka.
Muxuu adigu mustaqbalka kuula muuqdaa? ka qeybgal tartankeena oo nala wadaag aragtidaada, waxaadna ku guuleysan kartaa kombiyuutar.
Si aan kuugu bilowno waxaan weydiinay lix farshaxan-yaqaan oo caalamka oo dhan ah aragtidooda ku wajahan mustaqbalka.